တီတင့် (စက်မှု တက္ကသိုလ်): ကုန်ဆုံးရက်များ
ဘလော့နဲ့ဝေးခဲ့တာ ဘာလိုလိုနဲ့ တစ်လကျော်တောင် ရှိသွားပါပေါ့လား။ မထင်ရဘူး ဘာဖြစ်လို့ ရက်တွေ ဒီလောက်တောင် မြန်နေပါလိမ့်နော်။ ဒီရက်ပိုင်းအတွင်းမှာ ပို့စ်တွေမတင်ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ အကြောင်းရင်းတွေကို ပြန်ဆန်းစစ်ကြည့်မိတော့ ရှုပ်ထွေးနေတဲ့ လူမှုရေးတွေကြောင့်ပါပဲ။ ပို့စ်တွေမတင်ဖြစ်ပေမယ့် ကြုံတဲ့အခါ အချိန်တိုလေးမှာ ဖေ့ဘုတ်ကိုတော့ ဝင်မိပါရဲ့ အဆက်အသွယ် ပြတ်မသွားအောင် ဆွေမျိုး မိတ်ဆွေ အသိုင်းအဝိုင်းတို့ကို လတ်တစ်လော အခြေအနေလေးတွေ တီးမိခေါက်မိစေဘို့ ဓာတ်ပုံလေးတွေ တင်တာမျိုး ကွန်မန့်လေးတွေ ပေးတာမျိုးတော့ ရှိခဲ့ပါတယ်။ အချိန်ပေးပြီး ပို့စ်တစ်ပုဒ်ရေးဘို့တော့ အဆင်မပြေတာကြောင့် မတင်ဖြစ်ခဲ့သလို ဘလော့ဂါမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ ဘလော့တွေကိုလည်း အလည်အပတ် မသွားဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ ကိုယ့်ဝမ်းနာ ကိုယ်သာသိဆိုသလို ကူးစက်လာတဲ့ အပူမီးဟာ ကျမတို့ရဲ့စိတ်တွေကို ထုံထိုင်း စေခဲ့ပါတယ်။ အလှူအတန်း ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာ ကိစ္စတွေမှာ အားတက်သရော် ပို့စ်တွေ ရေးနိုင်ခဲ့ပေမယ့် ဝမ်းနည်းစရာ နာရေးကိစ္စမျိုး ကြုံလာတဲ့အခါမှာတော့ စာတစ်ပုဒ် မပြောနဲ့ စာတစ်ကြောင်း ဖြစ်လာဘို့ဆိုတာတောင် အနိုင်နိုင်ပါ။
ကိတ်မုန်လေးနဲ့ လက်ဆောင်ပစ္စည်းများ လာရောက်သူများ ကျေးဇူးပါ
ဖိုးစိန် ဘိုဘိုနဲ့ တွိုင်တို့ အဲဒီလို အပင်ပန်းခံကြတာ
စားပွဲအတွက် အစ အဆုံး ဒိုင်ခံလုပ်တာ ဘယ်သူလဲသိလား?
တွိုင်လည်းမနေရ လှော်ပြီး အမွှေးအကြိုင် ကြေအောင်ထောင်း
ဝါးတီးကိုတော့ အင်တိုက်အားတိုက် ကူညီကြ :D
ပေါက်မဲ ၁နဲ့၃၅ အကောင်းဆုံးနှစ်ခု ဆွတ်ခူးသွားတဲ့ စုံတွဲ
ဂျေးနဲ့ ဘယ်သူတွေလည်း သိတယ်ဟုတ် ?
ဒီတစ်ခါတော့ ဓာတ်ပုံတင်လိုက်ပြီ စိတ်ဆိုးနဲ့နော်
ခေါက်ဆွဲခွံ့တဲ့အချိန်ပဲ ဓာတ်ပုံရိုက်လို့ရတဲ့ TMH ရဲ့တားတားလေး
၂၈-၄-၂၀၁၂ ရက်နေ့မှာ ကျမ ကြိုတင် စီစဉ်ထားတဲ့အတိုင်း ဖိုးစိန်တို့အဖွဲ့ နေတဲ့အိမ်မှာ ဘလော့ဂါများနဲ့ ဆုံခဲ့တယ်။ ပန်းသေးခေါက်ဆွဲ ချက်တယ်ဆိုပေမယ့် အမှန်တကယ် ကိုယ်တိုင် ဘာတစ်ခုမှ လုပ်ရတာမဟုတ်ပဲ နှုတ်ကနေ လိုအပ်တာလေးတွေ ပြောရုံပါ။ အစအဆုံး ကူညီလုပ်ကိုင်ပေးတဲ့ ဖိုးစိန်နဲ့ ဘိုဘို မောင်တွိုင် မေသူ မီးလေး မေဇင်အေး(နောင့်) မောင်ရာချိုတို့ကို ကျေးဇူး အထူးတင်ပါတယ်။ ပန်းသေးခေါက်ဆွဲ လာရောက်အားပေးတဲ့ ဘလော့ဂါများကိုလည်း ကိုယ်ပိုင်အချိန်ထဲက ဖဲ့ပေးရတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အကြောင်းကြောင်းကြောင့် မလာရောက်နိုင် သူများကိုလည်း နောက်တစ်ကြိမ် ဆုံဆည်းနိုင်ခွင့် ရနိုင်အောင် ကြိုးစားပါအုံးမယ်။
ဆူရှီတစ်လိပ်ပြီးတစ်လိပ် ကုန်သွားလို့ ဓာတ်ပုံရိုက်ချိန်မရး)
ဒုတိယညီမလေးရဲ့ ကြက် ဗူးဟင်း နဲ့ ခရမ်းချဉ်သီးချက်
တတိယညီမလေးရဲ့ မြေစာဥ အချိုပွဲ
နေမကောင်းတဲ့ တူမလေးအိမ်မှာ အမှတ်တရ
အိမ်ပြန်ရောက်တော့ ညီမတွေက ပန်းသေးခေါက်ဆွဲစားချင်တယ်ဆိုလို့
ကျမတို့ ညီအစ်မသုံးယောက် အာမိုးကရိုးမှာ ရှိတဲ့ ညီမအငယ်ဆုံးရဲ့ အိမ်မှာ စုစုစည်းစည်း သုံးညဆက်တိုက် ဆုံဆည်းပြီးတဲ့ ဒီကနေ့တော့ ဂျူရောင်းအိမ်မှာရှိတဲ့ သားငယ်နေတဲ့အိမ်ကို ကျမ ပြန်လာခဲ့တယ်။ ပြန်ခါနီး ညီမလေးရဲ့ သမီးအငယ်က မျက်နှာမကောင်းတာကြောင့် ညီအစ်မတစ်တွေ လာမည့် သောကြာနေ့မှာ ပြန်ဆုံကြဘို့ ပြောခဲ့မိသေးတယ်။ အမှန်တော့ ရုံးပိတ်ရက်ဆိုရင် ဘလော့ဂါတွေ ဆုံနိုင်တာမို့ လာမဲ့ စနေ တနင်္ဂနွေမှာ မလေးရှားဘက်ကို အလည်သွားဖို့ ကြံရွယ်ထားပေမယ့် ဗီဇာက ရုံးပိတ်ရက်ခံသွားတာကြောင့် ဒီတစ်ပတ် မရနိုင်တာမို့ ခြေဦးကို ညီမလေးအိမ်ဘက် လှည့်ခဲ့ပြန်တယ်။ ညီမလေးအိမ်မှာ ဒီတစ်ခေါက် ပိတ်ရက် နေပေးပြီး မလေးဘက်က ပြန်ရောက်ရင်တော့ ကျောက်ကပ် လဲထားတဲ့ တူမလေးဆီကို တစ်လှည့်သွားနေပေးဘို့ စိတ်ကူးထားတယ်။
ထမင်းဖြူ ကောက်ညှင်း ကို ဆား မိုင်းရိုးနက်စ်တို့နဲ့ နယ်ထား
ဒီတစ်ခေါက်တော့ ဓာတ်ပုံရိုက်ဖြစ်အောင် ရိုက်း)
သားဇော်နဲ့အမှတ်တရ (သားအမိနှစ်ယောက် ရုပ်ဆင်တယ်ဟုတ်?း)
ဘဝဆိုတာ ကိုယ်ဖြစ်ချင်တဲ့အတိုင်း မဖြစ်ရသလို မဖြစ်ချင်တာတွေလည်း ဖြစ်ခွင့် ကြုံရတတ်တာ လူ့ဘဝပါ။ ကံကိုချည်းယုံပြီး မပုံရသလို လုံးဝဥသုံ ကံကို ယုံကြည်မှု မထားလို့လဲ မရပြန်။ ပြည့်စုံတဲ့ဘဝကို ပိုင်ဆိုင်ထားပေမယ့် မပြည့်စုံတဲ့သူတွေ ဒုနဲ့ဒေး တွေ့မြင်ခဲ့ဘူးပါတယ်။ အတိတ်ဘဝက စွန့်ကြဲပေးကမ်း လှူဒါန်းခြင်းပြုခဲ့တဲ့ ဒါနတရားရဲ့ အကျိုးပေးကြောင့် ဒီဘဝမှာ ဥစ္စာစည်းစိမ် ပြီးပြည့်စုံသူတွေ၊ ကိုယ်ကျင့်သီလ ကောင်းအောင် စောင့်ထိန်းခြင်းရဲ့ သီလတရား အကျိုးပေးကြောင့် အသက်ရာကျော် ရှည်စွာ နေထိုင်ခွင့် ရသူတွေ ကမ္မဌာန်းတရား အားထုတ်ခြင်းဆိုတဲ့ ဘာဝနာ အကျိုးပေးကြောင့် တရားစစ် တရားမှန်များ ရှာဖွေတွေ့ရှိသူတွေကို စာဖတ်သူတို့လည်း ကြုံဘူးဆုံဘူး ကြမှာပါ။ ဒါကတော့ ကိုယ်ပြုခဲ့သမျှ ကောင်းမှုကံ စေတနာအပေါ်မူတည်ပြီး ကံရဲ့ အကျိုးပေးပါ။
စကားလေးကြုံတုန်း ပြောခဲ့တာပါ။ ကျမရဲ့ ဒီရက်တွေမှာ ကုန်ဆုံးရက်များကို မှတ်တမ်းအဖြစ် သိမ်းရင်း ပို့စ်တစ်ပုဒ်အဖြစ် မျှဝေလိုက်ပြီနော်။ မိမိရဲ့ကုန်ဆုံးရက်များကို ပျော်ရွှင်ကြည်နူးမှုတွေအဖြစ် ကိုယ်တိုင် ဖန်တီး ရယူနိုင်အောင်ကြိုးစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။